Gadget သဘောတူညီချက်များ | Gadget သတင်း
အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်စျေးကွက်ရှိစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် gadget များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများကိုအစဉ်အမြဲစောင့်နေရန်သင်အခွင့်အရေးများရှိသည်။ Actualidad Gadget မှာမိမိကိုယ်ကိုခေါ်သောအရာတစ်ခုခုအတွက်အထူးနောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤဆောင်းပါးမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပြပါ ယခုအပတ်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး gadget များ
ဒီဆောင်းပါးကတဆင့် ကျနော်တို့အပတ်တိုင်း update, ငါတို့သည်သင်တို့၏အဓိကနှင့်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုပြသပါလိမ့်မယ် အမေဇုံ ဒီအပတ်အတွက် သို့သော်အထူးသီးသန့်မဟုတ်ပါ၊ သင်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုလည်းရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည် AliExpress သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းစတိုး။ ဤစာမျက်နှာကို Bookmark လုပ်ရန်သတိရပါ၊ သို့မှသာသင်ကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာကိုအသစ်ပြောင်းသည့်အခါတနင်္လာနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ထံလည်ပတ်နိုင်မည်၊ သင်ရှာဖွေနေသောကိရိယာသည်စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်။
Amazon ကငါတို့ကိုခွင့်ပြုတယ် ဝယ်ယူမှုအတွက်လစဉ် ၄ ကြိမ်ပေးချေမှု၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုများပြားသောပမာဏကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်လစဉ်ငွေပေးချေမှုလေးခုတွင်အဆင်ပြေစွာပေးဆောင်နိုင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနိုင်သည် 75 မှ 1000 ယူရိုကနေပမာဏသည် နှင့် Cofidis ခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်း၏နောက်ဆုံးစျေးဘေးတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
1 အမေဇုံအပေါ်မေလ 18-24 ရက်သတ္တပတ်အဘို့အအရောင်းအ
1.2 ၅၅/၆၅ လက်မ Samsung 55k TV
1.3 Cecotec စီးရီး 1490 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
1.4 Moulinex အစားအစာပရိုဆက်ဆာ
1.5 ၃၉၁ ယူရို Samsung Galaxy A71
1.6 ၃၉၁ ယူရို Samsung Galaxy A51
1.7 ၃၉၁ ယူရို Samsung Galaxy A40
1.8 Samsung Galaxy Note 10 ကိုယူရို ၆၈၇ ဖြင့်ရောင်းချမည်
1.9 Huawei P30 Pro ကိုယူရို ၅၅၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်
1.10 Huawei P30 Lite ကိုယူရို ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
1.11 ၁၈၉.၉၅ ယူရိုအတွက် Xiaomi Redmi Note6Pro
1.129ယူရိုများအတွက် Oppo A2020 184,99
1.132ယူရိုအတွက် Realme X439 Pro ကို
1.14 ၂၁၉ ယူရိုအတွက် Realme5Pro
အမေဇုံအပေါ်မေလ 18-24 ရက်သတ္တပတ်အဘို့အအရောင်းအ
အမေဇုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ င်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုထပ်မံပေးသည် Amazon Music Unlimited3လ သာ0ယူရိုသည်။ ဤမြှင့်တင်ရေးသည်ယခင်အစီအစဉ်များကဲ့သို့ပင်ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်မှယောက်ျားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်ကမ်းလှမ်းသောဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်းမရှိသေးသောဖောက်သည်များသာရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏အရာသည်ဂီတမဟုတ်လျှင်စာအုပ်များဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့ဆိုလျှင် Amazon က Kindle Unlimited ကိုတစ်လအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်ပုံမှန်လစဉ်ယူရို ၉.၉၉ ရှိသောစာအုပ်ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီကမ်းလှမ်းချက် ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၁ သန်းကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးတယ်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုဖတ်နိုင်သောခေါင်းစဉ်များဖြစ်သည့် Kindle၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းမှာလည်ပတ်မှုစနစ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ။
ကျောင်းသို့ပြန်လာခြင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်အမေဇုံမှယောက်ျားများသည်ကျောင်းသားများလက်ခံမှုကိုသေချာစွာပေးလိမ့်မည်ဟူသောကမ်းလှမ်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ပြောနေတာ Amazon Prime Student၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ်နှစ်လျှင် ၁၈ ယူရိုသာရှိသည်တစ်နှစ်လျှင် ၃၆ ယူရိုရှိသော Amazon Prime ၏အားသာချက်များအားလုံးကိုခံစားခွင့်ပြုသည်။
Amazon Prime မှပေးသောကောင်းကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသေချာပါက၎င်းကို ၃ ကြိမ်အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ Amazon Prime သည်ကုန်ပစ္စည်းနှစ်သန်းကျော်ကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည် ချုပ်ဗီဒီယို (Amazon ၏ streaming video service)၊ ချုပ်ဂီတ (ကြော်ငြာမပါဘဲသီချင်း ၂ သန်း)၊ချုပ်, ချုပ်စာဖတ်ခြင်း Twitch (စာအုပ်အမြောက်အမြားကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း)၊ flash ကမ်းလှမ်းချက်များကို ဦး စားပေးရယူခြင်း ...
ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းသွင်းရန်, သင်ဤ link ကိုမှတဆင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်သင်သာလိုအပ်သည် ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏အီးမေးလ်အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ပါအဲဒီအချိန်မှာ Amazon ကတစ်နှစ်ကို ၁၈ ယူရိုသာရမယ့်သူဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်မှာပါ။
Amazon က Echo Show 8 အသစ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Echo5ထက်ပိုကြီးတဲ့ screen size ရှိတဲ့ Echo Show အသစ်, ဒီမော်ဒယ် 8 လက်မမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအရကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ညီငယ်နှင့်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ပထမမော်ဒယ်သည်သင့်အတွက်သေးလွန်းပါက၊ ၁၂၉.၉၉ ယူရိုဖြင့်ရနိုင်သည်ဒါပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်အဘို့ငါတို့ကကိုင်နိုင်ပါတယ် သာ 89,99 ယူရိုသည်။
Actualidad Gadget မှာကျွန်ုပ်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ် အသစ် Echo ပြရန် 8 ကြိုးစားပါ, ငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်အကြံပြုတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အကယ်၍ ဖန်သားပြင်ပါသောစပီကာတစ်လုံးသည်သင်၏အိမ်ကိုသင်ရှာဖွေနေသည်မသေချာသေးပါက။
အမေဇုံပဲ့တင်သံ 3rd Gen 69,99 ယူရိုသည် (99,99 ယူရိုပုံမှန်အတိုင်းစျေးနှုန်း) ။
အမေဇုံပဲ့တင်သံတတိယမျိုးဆက် 34,99 ယူရိုသည် (ပုံမှန်စျေးနှုန်း 59,99 ယူရို) ။ ဒါ့အပြင်သောမော်ဒယ် နာရီထည့်သွင်း 44,99 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် (ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ၆၉.၉၉ ယူရို) ဖြစ်သည်။
ကင်မရာ မိုးလုံလေလုံ Cam အသံမြည် ကမ်းလှမ်းသည် 1080p HD ဗီဒီယို၊ နှစ်လမ်းသွားဆက်သွယ်မှု၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီအသိပေးချက်များ, အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် Alexa နှင့်အတူသဟဇာတ။ သင်၏ကင်မရာမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုပါကလစဉ် ၃ ယူရိုကုန်ကျပြီးကင်မရာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုရက်ပေါင်း ၃၀ အထိထိန်းသိမ်းထားသော Ring Protect အစီအစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အသစ်၏စျေးနှုန်း Ring အတွင်းပိုင်းကင်မရာသည်ယူရို ၅၉ ဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောလိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်ဘက်စုံသုံးမှုအတွက်ချိန်ညှိထားသောစျေးနှုန်းထက်ပိုသည်.
အမေဇုံကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ထုတ်ကုန်များအများအပြားပေးထားပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၏လုံခြုံမှု။ Ring Indoor ကင်မရာအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် ရွေ့လျားမှု detectors အနှင့်အတူမိုးလုံလေလုံလုံခြုံရေးကင်မရာစနစ်, အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပလုံခြုံရေးကင်မရာများ, ဘက်ပေါင်းစုံကင်မရာနှင့်အတူတံခါးကို peephole, ရွေ့လျားမှု detector နှင့်အတူကင်မရာ doorbell…ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်လက်ချင်းတွဲလုပ်ကိုင်သောထုတ်ကုန်များ Amazon က Echo Show လိုပဲ.
သင်၏ TV ဟောင်းကိုစမတ်တီဗွီတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုပါကသို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုကိုသင်ငြီးငွေ့မည်ဆိုလျှင် Netflix၊ Amazon Prime သို့မဟုတ် YouTube တို့ကိုနှစ်သက်ပါ ယူရို ၃၀ ကျော်လောက်အတွက်တချို့သောမော်ဒယ်များကိုသင်ပေးထားတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ Fire Stick မော်ဒယ်နှစ်မျိုးထဲကတစ်ခုကိုရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာ Alexa နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်မိုက်ကရိုဖုန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ၃၉.၉၉ ယူရိုမီးသတ်ကား y Fire Stick 4k ကို ၅၉.၉၉ ယူရို။ မင်းမှာစံအဟောင်းရှိရင်ရပြီ 29,99 ယူရိုအသစ် command ကို။
၅၅/၆၅ လက်မ Samsung 55k TV
Samsung က ၅၅ လက်မရုပ်မြင်သံကြားကိုပေးသည် 4k UHD၊ Alexa နှင့် Google Assistant, HDR10 + နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် သာ 589 ယူရို။ အကယ်၍ ၅၅ လက်မတိုနေရင်၊ စျေးနှုန်းကတော့ ၆၅ လက်မမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ် သာ 759 ယူရို.
Cecotec စီးရီး 1490 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
Cecotec Series 1490 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရောနှောထားသောအရောအနှောတစ်ခုပါရှိသည် လေဟာနယ်, မောင်း, MOP နှင့်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်။ Alexa နှင့် Google Assistant တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စီမံနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဖုန်စုပ်စက်၏ဈေးနှုန်းမှာ ၂၆၉ ယူရိုသာရှိသည် 179 ယူရို။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များတွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်ဖုန်ထက်ပိုကြီးသည့်အရည်နှင့်အရာဝတ္ထုများကိုဖုန်စုပ်ရန်ဖြစ်လျှင် Cecotec သည်အရည်နှင့် ၁၅ လီတာနှင့် ၁၄၀၀ ဝစွမ်းရည်ရှိသောအရည်များနှင့်အစိုင်အခဲများအတွက်ဖုန်စုပ်စက်ကိုပေးသည်။ ရေစစ်စက်၊ ပါဝါထိန်းညှိခြင်း၊ အိတ်မပါရှိခြင်း၊ မျက်နှာပြင်အားလုံးနှင့်သင့်တော်ပြီးဆက်စပ်ပစ္စည်း ၅ ခုရှိသည်။ ဘီးလေးဘီး၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်တောင့်သက်သာဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ပုံမှန်စျေးကတော့ ၇၄ ယူရိုပါ, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်အချိန်အဘို့, ငါတို့အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
Moulinex က Maxichef မီးဖိုချောင်သုံးစက်ရုပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် 45 ချက်ပြုတ်အစီအစဉ်များထမင်း၊ ထမင်း၊ ထမင်းကြော်၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ စီရီ၊ ဆန်၊ ခေါက်ဆွဲနှင့်ရေနွေးငွေ့တို့ကို ... ၂၄ နာရီအထိပရိုဂရမ်တင်နိုင်သည်၊ ၅ လီတာ (၃-၄ လုံလောက်သည်) လူများ) ။ သူ့ရဲ့ပုံမှန်စျေးနှုန်းက ၁၂၉.၉၉ ယူရိုဖြစ်တယ် 93,99 ယူရို။
၃၉၁ ယူရို Samsung Galaxy A71
Samsung သည်အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ ၆.၈ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော Galaxy A71 terminal ဖြစ်သည်။ ဒီအထူးသဖြင့်မော်ဒယ်က Dual SIM ပဲ RAM6GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128 GB
ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာ၊ ကင်မရာလေးလုံး အသီးသီး 64, 12,5နှင့်5mpx ။ ရှေ့ကင်မရာသည် 32 mpx သို့ရောက်ရှိပြီး အကယ်၍ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်အထက်ပိုင်းရှိအပေါက်တစ်နေရာတွင်ထားမည်ဆိုလျှင်။ ဤ terminal ၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ၄၆၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ သို့သော်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာယင်းကိုရနိုင်သည် 391 ယူရို။
၃၉၁ ယူရို Samsung Galaxy A51
အကယ်၍ သင်သည် Galaxy A50 ၏ကမ်းလှမ်းချက်များထက်အနည်းငယ်ပိုရှာဖွေနေပါကသာလွန်ကောင်းမွန်သည့် Galaxy A51၊ ၆.၅ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်၊ 6,5 GB RAM နှင့်4GB သိုလှောင်မှုစနစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ဘက်မှာတွေ့ရတယ် ကင်မရာလေးလုံး 48, mpx ၏ရှေ့အပြင်အသီးသီး ၄၈၊ ၁၂၊ ၅ နှင့် ၅ တို့ရှိသည်။ စျေးနှုန်းမှာ ၂၁၆ ယူရိုဖြစ်သည်။
၃၉၁ ယူရို Samsung Galaxy A40
သင်၏ဘတ်ဂျက်သည်တင်းကျပ်လွန်းပါကသင်စဉ်းစားသင့်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Samsung ရဲ့ Galaxy A40, ၁၇၉ ယူရိုသာရှာလို့ရမယ့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတယ် FullHD + resolution ဖြင့် ၅.၉ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်။ အတွင်း၌ Samsung ၏ Exynos 7904 ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM4GB နှင့်သိုလှောင်မှု 64 GB ပါရှိသည်။ microSD ကဒ်ဖြင့် 512 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
Samsung Galaxy Note 10 ကိုယူရို ၆၈၇ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Galaxy Note 10 အကြောင်းပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ စိတ်ကူးထားတဲ့ terminal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် သာ 687 ယူရိုသည်နှင့် အတော်လေးသိသိသာသာလျှော့စျေး 959 ယူရိုကနေ အများအားဖြင့်ကုန်ကျသည်။ ဒီဗားရှင်းတွင်သိုလှောင်မှု ၂၅၆ GB ပါဝင်သည်၊ ၎င်းသည်စပိန်ဘာသာဖြစ်ပြီး 256 GB RAM ပါဝင်သည်။
Huawei P30 Pro ကိုယူရို ၅၅၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Huawei P30 Pro သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဈေးကွက်တွင်ကင်မရာသာမကသာမကစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုတို့တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei က P30 Pro ကို Amazon တွင်ရနိုင်သည် သာ 550 ယူရိုသည်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုပါ စျေးကွက်ရှိ high-end ဆိပ်ကမ်းအများစုကိုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမလိုမုန်းထားရန်လိုသည်.
Huawei P30 Lite ကိုယူရို ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Huawei ၏ P30 Pro သည်အသုံးမ ၀ င်လျှင် Lite ဗားရှင်းကိုသွားနိုင်သည်။ Huawei P30 Lite သည် Terminal နှင့်အတူ ၆.၁၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 6,15 GB RAM၊4GB သိုလှောင်မှု Kirin 710 ပရိုဆက်ဆာကစီမံခန့်ခွဲတယ်။ နောက်ဖက်မှာကင်မရာ ၃ လုံး (၄၈ + ၂ + ၈ mpx) ရှိတယ်။ ၎င်းကို Android3မှ Google ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်စီမံသည်။ ထို terminal ကိုအမေရိကန်အစိုးရ၏ဟွာဝေသို့ဗီတိုအာဏာမသုံးမီဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်စျေးကတော့ ၇၄ ယူရိုပါ, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်, သူ့ကို ၁၉၉ ယူရိုသာရနိုင်တယ်.
၁၈၉.၉၅ ယူရိုအတွက် Xiaomi Redmi Note6Pro
ယခုအပတ်တွင်ရောင်းချသောအခြားစမတ်ဖုန်းများမှာ Redmi Note 6၊ အာရှထုတ်လုပ်သူ Xiaomi မှ terminal ဖြစ်ပြီး Amazon မှ ၁၈၉.၉၅ ယူရိုဖြင့်ရှာနိုင်သည်။ Xiaomi ရဲ့ Note 189,95 Pro က ၆.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုအပေါ်ဘက်မှာသေးငယ်တဲ့ frame တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ် SIM Card နှစ်ခုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ၄ GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု ၆၄ GB ပါရှိသည်။
နောက်ကျောမှာကျနော်တို့ကရှာပါ 12 နှင့်5mpx dual camera, ၄၀၀၀ mA ဘက်ထရီh နှင့် 12 mpx ရှေ့ကင်မရာ။ Xiaomi ၏ Redmi Note6Pro ၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ၂၄၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အခွင့်ကောင်းယူပါက ၄ င်း၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှယူရို ၆၀ ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
9 ယူရိုများအတွက် Oppo A2020 184,99
Oppo ထုတ်လုပ်သူကကျွန်ုပ်တို့အား A9 2020 ကိုပေးပြီး terminal ပါလာသည် 4GB RAM၊ 128GB သိုလှောင်မှု နှင့်ရုံများအတွက် quadruple နောက်ကင်မရာစနစ် 184,99 ယူရို။ မျက်နှာပြင်သည် HD + resolution ဖြင့် ၆.၅ လက်မအမြင့်သို့ရောက်ရှိပြီး Qualcomm ၏ Snapdragon 6,5 နှင့် selfie အတွက်အထူး 665 mpx ရှေ့ကင်မရာဖြင့်စီမံထားသည်။
2 ယူရိုအတွက် Realme X439 Pro ကို
Realme ကုမ္ပဏီသည် Xiaomi နှင့် Samsung တို့နှင့်ယခင်က Huawei တို့လွှမ်းမိုးသောကဏ္inတွင်အရေးပါသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ရန်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Realme X2 Pro ကို၎င်းသည် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်လက်ရှိတွေ့ရှိနိုင်သောစျေးအကြီးဆုံး high-end နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
အမေဇုံမှယူရို ၄၃၉ ဖြင့်ရောင်းချသောဒီ terminal ကို Snapdragon 439+ (ဒုတိယမျိုးဆက်) ကလိုက်ပါစီးနင်းသည်။ 12 GB RAM နှင့် 256 GB ကို သိုလှောင်မှုနေရာ။ မျက်နှာပြင် SuperAMOLED သည် ၆.၅ လက်မ FullHD + resolution နှင့် 6,5 Hz ရှိသည်။
၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဘက်ထရီသည်၎င်းထံရောက်ရှိသည် 4.000 mAh ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းတာဝန်ခံသဟဇာတ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာငါတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ် ကင်မရာလေးလုံး လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်ရှေ့တွင် 16 mpx ကင်မရာကိုဖုံးအုပ်ရန်။ စျေးနှုန်း Realme X2 Pro သည်စွမ်းအားအရှိဆုံး version တွင်ယူရို ၄၃၉ သာရှိသည်.
၂၁၉ ယူရိုအတွက် Realme5Pro
သို့သော်သင်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ပြန်လည်ရန်အတွက်ငွေများစွာမသုံးစွဲလိုပါကအခြား Realme မော်ဒယ်ဖြစ်သော Realme5Pro ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ 8 GB RAM နှင့် 128 GB Internal Storage။ ကင်မရာတည်ရှိရာအပေါ်အလယ်ပိုင်းရှိအပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုနှင့်အတူဖန်သားပြင်သည် ၆.၃ လက်မအထိရှိသည်။
အနောက်ဘက်တွင် ၄၈ mp ရှိသောအဓိကကင်မရာ ၄ လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ Qualcomm ၏ Snapdragon4ပရိုဆက်ဆာကိုဉာဏ်ရည်တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်ပြီးဘက်ထရီအားတစ်နာရီကျော်ကျော်အားသွင်းနိုင်သည်။ 4.035 mAh ဘက်ထရီ။ ၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ၂၄၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » gadget များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ (မေလ ၁၈ ရက်မှ ၂၄ ရက်အပတ်)
ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကို iPhone နှင့် Android တွင်မည်သို့ရှင်းလင်းရမည်နည်း